San Htun's Diary: တဆောင်းသစ်ပြန်ပြီ...
စတိတ်မှာ ရာသီဥတု ခန့် မှန်းတာ သိပ်မှန်ပါတယ်။ တနေကုန် မိုးအုံ့ ပြီး ညနေစောင်းမှ နေပူမယ်ဆိုရင် တကယ်ပူတာပါ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ရွာရန် ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ဆိုလို့ထီးဆောင်သွားတာ မိုးတစက်မှ မရွာတဲ့အပြင် နေက ခြစ်ခြစ်တောက် ပူလို့ ။ ရွာရန် ရာခိုင်နှုန်း ၄၀ ဆိုလို့ထီမဆောင်တဲ့နေ့မိုးရွာတော့တာပဲ။ ဗီယက်နမ်မှာလည်း ဒီလိုပါပဲတဲ့ မုန်တိုင်းဝင်မယ်ဆိုလို့လူတွေက အလုအယက် စားစရာတွေ ဝယ်စု။ နောက်၂ရက်အထိ မုန်တိုင်းက မလာ။ မလာတော့ဘူးထင်နေတော့မှ၊ စုထားတဲ့ရိက္ခာတွေကုန်တော့လောက်မှ မုန်တိုင်းကဝင်။ ဒီလို ကိုးရိုးကားရားတွေက ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှ ကြုံရတာနဲ့တူပါရဲ့ ။
ဒီမှာတော့ ရာသီဥတုအခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ဝတ်ရစားရတာကလား။ တခါက weather forecast လည်း မကြည့်ဘဲ ရိုးရိုးဘွတ်ဖိနပ်ပဲ စီးသွားတာ နှင်းတွေ ကျလာတော့ တဘိုင်းဘိုင်းနဲ့စန်းထွန်းတယောက် ဖားဖမ်းနေခဲ့ဖူးတယ်။ ဆူနမ်၊ရာမားရဲ့လက်တွေကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ညှစ်ပြီး ပြန်ခဲ့ရတယ်။ ဒီကတည်းက နောက်များဆို မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ပထမဆုံးလုပ်တာက weather forecast ကြည့်တော့တာပဲ။
စနေနေ့ က တနေကုန် မိုးအုံ့ နေပြီး နေ့ လည်မှာတော့ လေရောမိုးရော သည်းတာများ ပိန်းပိန်းကို မှောင်လို့ ။ ခေါင်မိုးဆီက ဖြောက်ဖြောက်အသံကြားလို့ပြတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းချောင်းလိုက်တော့ လား..လား..လက်မ လက်သည်းခွံ အရွယ်လောက်ရှိတဲ့မိုးသီးတွေ။ ဒီအချိန်မှာ မိုးရေထွက်ချိုးလိုက်လို့ ကတော့...:D။ မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာဆို ကော်ဖီတခွက်၊ ဝထ္ထုကောင်းကောင်းတအုပ်နဲ့နှပ်နေလို့ ကတော့ ဇိမ်မှဇိမ်ပဲ...းD။
တနင်္ဂနွေကစလို့ရာသီဥတုက သိသိသာသာ အေးလာပါပြီ။ ဆောင်းဦးရောက်ပြီးကိုး။ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာက Fall ။ မြန်မာပြည်က တောင်ကြီးဆောင်းလို မြူတွေမရှိပေမဲ့ချမ်းအေးတာတော့ တူတယ်။ မချမ်းတတ်တဲ့သူတွေလောက်သာ အနွေးထည်လွတ်လို့ လူတိုင်း အနွေးအထည်လေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ။ အိမ်မှာ မေကလွဲရင် ဖေ၊မကြီး၊မောင်မောင်နဲ့စန်းထွန်းက နည်းနည်းအေးရင်တောင် အနွေးထည်၊ စောင်ကိုယ်စီနဲ့ ။ မေကတော့ ပြောတတ်ပါတယ် "'ဒီသားအဖတွေ ချမ်းတတ်ရန်ကော "။ မြောက်ပိုင်းကျတဲ့အိုင်အိုဝါပြည်နယ်ရဲ့ ဆောင်းက ကြမ်းတယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်။ ချမ်းတတ်တဲ့ စန်းထွန်းနဲ့ အရမ်းအေးတဲ့ အိုင်အိုဝါဆောင်း အဲဒီမှာ စတွေ့ တော့တာပဲ။
ပြတင်းပေါက်ကနေ သာယာစွာ တိုက်ခတ်လာတဲ့လေနုအေးဆီမှာ မြန်မာပြည်က ဆောင်းရနံ့ ကို ရလိုက်သလို...။ ဟိုင်းကြီးဆောင်းကတော့ အတော်အေးပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ဆောင်းတွင်းမနက်စောစောဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ထပြေး၊ ပြန်လာရင် အငွေ့ တထောင်းထောင်းထနေတဲ့ကောက်ညှင်းပေါင်းစား၊ ရွာထိပ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ခရေပန်းသွားကောက်၊ ဘတ်မင်တန်ရိုက်။ စံပြမှာတော့ အိမ်နားက အသက်၈၀ကျော် အဘွားကြီးက ချမ်းတတ်တော့ မီးလှုံလေ့ရှိပါတယ်။ အကြံပိုင်တဲ့ စန်းထွန်းက မီးလှုံရင်း အလာဘ သလာဘပြောရင်း ပြောင်းဖူး၊ အာလူး၊ ကန်စွန်းဥ၊ ကြည်သွန်ဖြူဖုတ်လို့ ရတာ အကုန်ဖုတ်းD။ နေပြထားလို့မွေ့ ယာ၊ ဂွမ်းကပ်စောင်တွေကနေ အနံ့ မွှေးမွှေးလေးကို ရှုရင်း ကွေးရတာလည်း အရသာတမျိုး။
ပုသိမ်ဆောင်းကတော့ ဟိုင်းကြီးဆောင်းထက် အအေးပေါ့တယ်။ မနက်စောစော ဝေလီဝေလင်းမှာ ရွှေမုဋ္ဌောဘုရားသွားပြီး အပြန်ဈေးကြီးထဲက ကောက်ညှင်းပြန်ပေါင်းစား။ သီတင်းကျွှတ်ပြီးရင် ကမ်းနားလမ်းမှာ ညဈေးခင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ညဈေးတလျှောက် လမ်းလျှောက်ရင်း မုန့် တွေ စားရတာလည်း ပျော်စရာတမျိုး။
ရန်ကုန်ဆောင်းကတော့ အနွေးထည် လွတ်အောင်ကို အအေးပေါ့တာပါ။ ချမ်းလည်း ခဏ။ သီတင်းကျွှတ်၊ တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်တွေ၊ ဘုရားပွဲတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည်ဆောင်းကို လွမ်းတယ်။
I love the winter especially while snowing. I still remember going out forawalk just to feel the touch of snow.
ဒီမှာတော့ မိုးတွေရွာလို့ကောင်းတုန်း၊ ကွေးလို့ကောင်းနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်...မိုးအေးအေးနဲ့ ချိုးကွေးကွေးနေရတာ အင်မတန်ဇိမ်ရှိတာမို့...စန်းထွန်းလည်း ဆောင်းအေးအေးမှာ မိကျောင်းကွေးကွေးနေလိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ရဲ့...နှင်းတွေဖွေးဖွေးလှုပ်နေတာကတေတော့လှပါရဲ့ဗျာ...တစ်ပတ်လောက်နေလို့ နှင်းတွေအရည်ပျော်ကုန်ရင် ဗွက်ရေတွေဖြစ်ကုန်တာတော့ စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့...
ကုိုယ်လည်းမြန်မာပြည်ဆောင်းရဲ့ ပွဲဈေးတန်းက မုန့် တွေ နဲ့ စဉ့်အုိုးဆုိုင်တွေကို လွမ်းတယ်။ ပြောရင်းနဲ့ ရေမုန့် တောင်လုပ်စားချင်လာပြီ။
တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း ဆောင်းဆို သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာ
နှင်းလေးတွေက ခုလို ဖြူဖြူဖွေးဖွေးမဟုတ်ပေမဲ့ ဖွဲဖွဲလေးကျလို့ပေါ့။
ရာသီထဲမှာ ဆောင်းကို အကြိုက်ဆုံးမို့ ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် ပျော်မယ် ထင်ပါတယ်
ခုလည်း ဒီမှာတော့ ချမ်းသေးဘူး ၁၁လပိုင်းလောက်မှ တအားအေးမှာ နေ့ခင်းကြီး အပြင်မထွက်ရင် အိမ်ထဲမှာဂွမ်းစောင်ခြုံပြီး နေရဦးမယ်
ဒီဘလောဂ်ရဲ့ တန်းပလိတ်ကိုလည်း အလွန်နှစ်သက်မိပါတယ်။
ရန်ကုန် ဆောင်းကို လွမ်းတယ် စန်းထွန်းရေ အမှန်ပဲ ဒီမှာတော့ အထပ်ထပ်ဝတ်ရလို့ စိတ်ညစ်လယ် ...:)
နှင်းမကျသေးဘူး..အဲဒါ ဖေဖေါ်ဝါရီတုန်းက ရိုက်ထားတာ...နိုဝင်ဘာလလယ်ကစပြီး နှင်းထုက ၈လက်မအထက်တဲ့
template ပြောင်းမယ်လို့ကြံစည်နေတာ။ ကြိုက်တာမတွေ့ သေးလို့ ။ မေသိမ့်၊ မြတ်မွန်တို့ ရဲ့template ကို ကြိုက်တာ အရမ်းပဲ။ template ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပြောင်းတော့ဘူး...းD
ဟုတ်တယ်...အထပ်ထပ် ဝတ်ရတာကို စိတ်ညစ်တယ်...အဝတ်ပုံကြီးကျနေတာပဲ...